အမည်မသိစာအုပ်: မင်းကိုပဲ အပြစ်တင်တော့မယ်။
( ၂၁ )ရာစုမှာ မိန်းမတွေဟာ ယောကျာ်းတွေနဲ့အတူ ရင်ဘောင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်လာကြပါပြီ။ ဘယ်အလုပ်တွေမှာပဲကြည့်ကြည့် မိန်းမဝန်ထမ်းတွေက တောင်ပုံရာပုံပါပဲ။ company ၊ အရောင်းဆိုင် ၊ စက်ရုံ စတဲ့နေရာတွေမှာ အဓိကဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေက မိန်းမသားတွေချည်းပါပဲ ။ အဲလို မိန်းမတွေချည်း နေရာယူလုပ်ကိုင်နေကြတော့ ယောကျာ်းတွေက ဘာအလုပ်လုပ်လို့ရကြသလဲ … ။
ဟုတ်ကဲ့ … ။ ရှိပါတယ် … ။ ယောကျာ်းတွေက အထွေထွေလုပ်သားတို့ ၊ ရုံးပြာတာတို့ ၊ ဒရိုက်ဘာတို့ ၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတို့ အဲလိုနေရာတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ် ။ မိန်းမတွေထက် အဆင့်နိမ့်တဲ့ နေရာဌာနတွေမှာ လုပ်နေကြရတာပါ ။ အလုပ်ရှင်တွေကလည်း အလုပ်ခေါ်ရင် အမျိုးသမီးဝန်းထမ်း အလိုရှိသည် ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ပဲ တင်ကြတာလည်း ပါပေသည် ။
မိန်းမတွေအများဆုံး ဦးဆောင်နေတဲ့လက်အောက်မှာ ယောကျာ်းတွေက သူတို့ခိုင်ထားတဲ့ ကိစ္စအဝဝကို မငြီးမငြူလိုက်လုပ်ပေးနေရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာပေါ့ဗျာ … ။
“ရွှေအလင်း” company က ခရီးသွား အေဂျင်စီလုပ်ငန်းစု တစ်ခုဖြစ်သည် ။ ရန်ကင်းရှိ ကွန်ဒိုမီယံတိုက်ခန်းတစ်ခု၌ ရုံခန်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး ရုံးဝန်ထမ်းလူအင်အား( ၁၀ )ယောက်ခန့်ဖြင့် လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည် ။ ထို company ရှိ ဝန်ထမ်းအများစုက မိန်းမသားတွေ ဖြစ်ပြီး လူနည်းစုသာ ယောကျာ်းများဖြစ်ကြသည် ။
ပိုင်ရှင်က မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်မတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။ နံမည်က ဒေါ်လျှံဝေ … ။ ဒါပေမယ့် သူမက ထိုလုပ်ငန်းကို အစစအရာရာ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် လူတစ်ယောက်နှင့်လွှဲထားပြီး ကျန်းမားရေးအရ အနားယူနေလေသည် ။ ထိုသူမှာ စုစုလဲ့ဆိုသည့် အသက် ( ၃၀ ) အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သည် ။ စုစုလဲ့က တစ်ကယ်လည်း တော်ပါသည် ။ သူမပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဘွဲ့လက်မှတ် ၊ သင်တန်း လက်မှတ်တွေက ဖိုင်တစ်ဖိုင်နှင့် အပြည့် တစ်ထပ်ကြီးရှိသည် ။ ဒါကြောင့်လည်း သူဌေးကိုယ်တိုင်က ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ရာထူးကြီးကြီးပေးထားတာ ဖြစ်သည် ။
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်သည့်ကိစ္စတော့မဟုတ် ။ ခရီးသွား အေဂျင်စီလုပ်ငန်းဆိုတာမျိုးက ရုံးခန်းမှာထိုင်ပြီး ဖုန်းလေးနဲ့ အချိတ်အဆက်လုပ်ပြီး လက်မှတ်ဖြတ် ၊ ကုန်အတင်အပို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းများ လုပ်ပေးရလို့ မပင်ပန်းဘူး ထင်ရပေမယ့် အတော်တော့ ခေါင်းစားသည့် အလုပ် ။ ဒီတော့ စုစုလဲ့မှာလည်း အမြဲလိုလို အလုပ်တွေနဲ့ လုံးထွေးနေတတ်လေသည် ။
စုစုလဲ့က အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။ လင်ဖြစ်သူက အဝေးပြေး express ကားကို ကိုယ်တိုင်ထောင်ပြီး မောင်းနေသူဖြစ်တော့ အိမ်းကို သိပ်မကပ်ဖြစ်သည့် လူမျိုး ။ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရခြင်းကြောင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သိပ်ပြီး လက်ပွန်းတတီးမရှိလှ ။ အလွမ်းသည်လို့မရကြသည်မှာပင် အချိန်တွေ အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည် ။
တစ်ကယ့်တစ်ကယ် ဘဝမှာ လင်မယားတွေဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ အတူမနေဖြစ်ကြ ၊ လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုလုပ်ဖြစ်ကြသည့် လင်မယားစုံတွဲတွေ ဒုနဲ့ဒေးပင် ။ ထိုအထဲတွင် စုစုလဲ့တို့ လင်မယားလည်း အပါအဝင်ပေါ့ ။
သွေးသားဆန္ဒ ၊ လိင်မှုကိစ္စတွေကိုမေ့ဖျောက်ပြီး အလုပ်ထဲအာရုံစူနစ်ပြီး နေလာခဲ့သည့်စုစုလဲ့တစ်ယောက် ဒီနေ့လည်း ထုံးစံအတိုင်း သူများတွေရုံးဆင်းပြီးကြတာတောင် သူမမှာ အလုပ်မပြီးနိုင်သေး ။ လကုန်ရက်မို့ ဝန်ထမ်းလစာ ၊ ဝင်ငွေ ၊ ထွက်ငွေစာရင်းတွေ လုပ်နေရသည် ။ သူမက ဒီ company ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ရာထူးရထားတာမို့ စာရင်းတွေစစ်ပြီး သူဌေးထံပို့ပေးရဖို့ ရှိနေ၏ ။ ထို့ကြောင့်လည်း အလုပ်က မပြတ်သေးတာ ဖြစ်တော့သည် ။
“အစ်မ … ဒီနေ့လည်း နောက်ကျမယ်ထင်တယ် … အဆာပြေစားဖို့ တစ်ခုခုသွားဝယ်ပေးရမလား …. ”
ရုံးအကူလည်းဖြစ် ၊ ရုံးမှာညစောင့်အိပ်သည့် နေလင်းက အလိုက်သိစွားမေးလာတာမို့ ။
“အေးကွယ် … အစ်မနဲနဲနောက်ကျအုံးမှာ … ဒီလိုလုပ် အိမ်ပြန်ရင်လည်း ထမင်းစားဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ကြေးအိုးပဲသောက်တော့မယ် … အစ်မကို ကြေးအိုးတစ်ပွဲဝယ်ခဲ့ပေး … မင်းလည်း စားချင်တာ ဝယ်စားခဲ့လေ … ရောပိုက်ဆံ”
နေလင်းထွက်သွားတော့ စုစုလဲ့ တစ်ယောက် အလုပ်ထဲပြန်ပြီး အာရုံရောက်သွားပြန်သည် ။ သူမဘယ်လောက်တောင် အလုပ်ထဲ နစ်မြောသွားမိသည် မသိ ။ အချိန်ဘယ်လောက် ကုန်သွားမှန်လည်း မသိ။
“ဟာ … အစ်မ … မပြန်ရသေးဘူးလား … ဆောရီးပဲ အစ်မရာ … သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့နေလို့ အစ်မပြန်သွားပြီတောင် ထင်နေတာ … ”
“အို … ဟုတ်ပါရဲ့ … ရှစ်နာရီတောင် ထိုးနေပြီ … အလုပ်ကလည်း မပြတ်သေးဘူး … မနက်ဖြန် သူဌေးကို ပို့ပေးရမှာ … ကျွတ် … ဒုက္ခပဲ … ”
စုစုလဲ့ တစ်ကယ်စိတ်ပျက်သွားသည် ။ ယခင် လုပ်နေကျ စာရင်းအတိုင်းဆို ဒီလောက်အချိန်ကြာမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ကားလိုင်းနှစ်လိုင်း အသစ်ဝင်လာခြင်းကြောင့် စာရင်းဇယားတွေ ပိုပြီးများလာကာ အခုလို အလုပ်ရှုပ်နေရခြင်းပင် ၊ အချိန်လည်း အတော်စောင်းနေပြီမို့ စိတ်ပျက်မိသွားခြင်းလည်း ဖြစ်၏ ။ သူမက အင်းစိန်ထိ ပြန်ရမှာဖြင့်သဖြင့် အပြန်ခရီးအတွက် တွေးပြီးပူနေရခြင်းဖြစ်သည် ။
“အစ်မ … ဒီလိုလုပ်ပါ့လား … ဒီမှာပဲ စာရင်းတွေပြတ်အောင် လုပ်သွားလိုက်ပေါ့ … အပြန်ကျနော် လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ် … ”
“ဖြစ်ပါ့မလား … မင်းပြန်တော့ တအားမိုးချုပ်နေမှာပေါ့ … ”
“ဖြစ်ပါတယ် … အင်းစိန်ဘက်မှာ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ရှိတယ် … အဲ့ဒီမှာ ဝင်အိပ်လည်းရတယ် …. ကဲပါ … အခု ဝယ်လာတဲ့ ကြေးအိုးတွေ အရင်စားလိုက် … ကျနော် ထည့်ပေးမယ် … ”
နေလင်းက သူ့ဘာသာ အကြံပေး ၊ သူ့ဘာသာ စီမံခန့်ခွဲပြောဆိုပြီး ရုံးအနောက်ရှိ စတိုခန်းလေးထဲ ဝင်သွားသည် ။ စုစုလဲ့မှာ နေလင်းပြောသည့် အကြံအတိုင်း လိုက်လုပ်လိုက်တာပဲ ကောင်းမည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်သည် ။ အလုပ်ကို အိမ်ယူသွားပြီး လုပ်မည်ဆိုလျှင် သူမပြန်ရောက်မည့်အချိန်နဲ့ တစ်နေကုန်လည်း ရုံးမှာ လုပ်နေရသည့် ပင်ပန်းမှုများကြောင့် အိမ်ရောက်တာနဲ့ ဖလက်ပြသွားမည်ဆိုတာ သေချာတာမို့ နေလင်းပြောသည့် အကြံကို လက်ခံလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည် ။
“အစ်မ … ဒီမှာရပြီ … စားလိုက်အုံး … ပြီးမှ အလုပ်ဆက်လုပ်ပေါ့ …. အစ်မလုပ်ပြီးရင် အသံပေးလိုက်လေ … ကျနော် အခန်းထဲမှာ ရှိမယ် … ”
“မင်းကော … ဘာမှ မစားဘူးလား …”
“ကျနော်က ကြေးအိုးသွားဝယ်ရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီး ဘီယာနဲနဲသောက်လာတယ် အစ်မရဲ့ ဟဲဟဲ … စားလည်း စားပြီးပြီ … အစ်မပြီးရင်သာ အသံပြုလိုက် … ကျနော် အခန်းထဲမှာ ခဏနှပ်လိုက် အုံးမယ် …”
နေလင်းက ကြေးအိုးပန်းကန်ကို စားပွဲပေါ်ချပေးပြီး ရုံးခန်းအနောက်ဘက်ရှိ သူအိပ်သော စတိုခန်းလေးထဲသို့ ဝင်သွားလေသည် ။
အလုပ်ချိန်ကျော်လွန်သွားပြီးသည့်တိုင်အောင် သူမကို လေးစားမှု ၊ ဂရုစိုက်မှုများဖြင့် တလေးတစား ဆက်ဆံတတ်သော နေလင်းကို အမှတ်ပေးလိုက်မိသည် ။ နေလင်း၏ ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း စုစုလဲ့မှာ စိတ်ထဲ
“ဒီကောင်လေး အလိုက်လဲသိတယ် … ခိုင်းလည်းကောင်းတယ် … သူဌေးကိုပြောပြီး ရာထူးလေး တိုးပေးဦးမှပဲ …” ဟုမှတ်ချက်ချလိုက်မိသည် ။ စုစုလဲ့တစ်ယောက် ကြေးအိုးလေးသောက်လိုက် ၊ စာရင်းလုပ်လိုက်ဖြင့်ပင် အလုပ်ကပြီးသွားသည် ။ အလုပ်လည်းပြီး ဗိုက်လည်းပြည့်သွားသည်မို့ စိတ်ထဲပေါ့ပါးသွားရသည် ။
“အင်း … ကျွတ် … ကျွတ် … အကြောတွေတောင် တော်တော်တက်သွားတယ် … ဟင်း … ကိုးနာရီတောင် ထိုးပြီးပြီ … ”
နာရီကြည့်မိတော့မှ စုစုလဲ့ မျက်လုံးပြူးသွားသည် ။ ဒီအချိန်တိုင်းဆို ကားငှားသွားတောင် ( ၁၀ ) နာရီကျော်လောက်မှ အိမ်ရောက်ပေတော့မည် ။ စုစုလဲ့ သူမ၏ ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်စွာသိမ်းဆည်းလိုက်သည် ။ အပြန် နေလင်း လိုက်ပို့မည်ဟု ပြောပေမယ့် ကားပဲငှားသွားတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ နေလင်းကို မခေါ်တော့ဖို့ စိတ်ကူးလိုက်သည် ။ နေလင်း လိုက်ပို့မည်ဆိုလျှင်လည်း သူမအိမ်ပြန်ရောက်ချိန် နေလင်းပြန်ဖို့ အခက်အခဲရှိမှာကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာမိလို့ အဖော်အဖြစ်မခေါ်တော့ခြင်း ဖြစ်သည် ။
စုစုလဲ့ပြန်တော့မည်ဆိုပေမယ့် ဒီအတိုင်းထပြန် ၍ မဖြစ်သေး ။ ရုံးခန်းတံခါး ပိတ်ရအုံးမည် ။ နေလင်းကို တံခါးလိုက်ပိတ်ပေးဖို့ နှိုးရအုံးမည် ၊ နေလင်းအိပ်သည့် အခန်းဘက်သို့ စုစုလဲ့ လျှောက်လာခဲ့သည် ။
“နေလင်း … နေလင်း … ”
အခန်းရှေ့ မှ စုစုလဲ့အော်ခေါ်သည် ။ ပြန်ထူးသံ မကြားရ ။
“ဒီကောင်လေး … ဘီယာသောက်လာတာ မူးပြီးအိပ်ပျော်သွား ပြီလား မသိဘူး … ”
စုစုလဲ့ ရေရွတ်လိုက်ရင်း အခန်းတံခါးကို အသာတွန်း ကြည့်တော့ ပွင့်ဟသွားသည် ။ အခန်းတွင်း ထောင့်တစ်နေရာ ၌ နေလင်းခွေခွေလေး အိပ်ပျော်နေ၏
နေလင်းက အသက် ( ၂၂ ) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး လူငယ်လည်းဖြစ် ၊ တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယသမားမို့ အနေအထိုင် စည်းစနစ်မရှိ ။ စတိုခန်းထဲရှိ ကတ္တူစက္ကူပုံး တွေကိုဖြတ်ပြီး သမံတလင်းပေါ်ခင်းကာ အပေါ်က ယိုးဒရာဖျာတစ်ချပ်ခင်းပြီး ခေါင်းအုံးတစ်လုံး ၊ စောင်တစ်ထည်ဖြင့်ပင် ဖြစ်သလို အိပ်တက်သူ ။ ထိုအိပ်ယာဘေး၌ ဟမ်းဘက်အိတ်ကြီး တစ်လုံးဖြင့် သူ၏အသုံးအဆောင်များ ထည့်ထားသည် ။ သူ၏ အဆောင်အယောင်က ထိုမျှပင် ။
“ဒီကောင်လေး ဖြစ်သလိုအိပ်တာပဲ … ”
ကြမ်းပြင်တွင်ဖျာခင်းပြီး ဖြစ်သလို အိပ်နေသော နေလင်းကိုကြည့်ပြီး စုစုလဲ့ စိတ်ထဲ သနားသွားသည် ။ နေလင်းက ဒီရုံးမှာ အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ် ၊ ရုံးအကူအဆင့်ဆိုတော့ အားလုံးခိုင်းဖက်ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေသည် ။ ဒါပေမယ့် မငြိုမငြင် မျက်နာမပျက် လုပ်ပေးတတ်သည့် နေလင်းကို စုစုလဲ့ သတိထားနေတာ ကြာပြီဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့်လည်း ရာထူးတိုးပေးဖို့ သူမစိတ်ကူးထားခြင်းဖြစ်၏ ။
“နေလင်း … နေလင်း … အစ်မပြန်တော့မယ် … ခဏ ထအုံး …”
စုစုလဲ့က နှုတ်မှလည်းပြော ၊ အခန်းဝမှ နေလင်းအိပ်နေရာသို့လည်း လျှောက်သွားပြီး နေလင်းကို နှိုးသည် ၊ ဒါပေမယ့် ဘသားချောက အိပ်ပျော်နေဆဲ … ။
နေလင်း၏ အနားရောက်သွားတော့ စုစုလဲ့က နေလင်း၏လက်မောင်းကို ကိုင်လှုပ်နှိုးဖို့ ဟန်ပြင်လိုက်သည် ။
စုစုလဲ့ လက်က နေလင်း၏ လက်မောင်ပေါ်မရောက်ဘဲ တန့်သွားသည် ။ ထိုမှ နေလင်း၏ခေါင်းအုံးဘေးမှ ရှုပ်ပွနေသော စာအုပ်များနှင့် MP-4 လေးဆီသို့ အကြည့်နှင့်အတူ လက်ကပါ ရောက်သွားခဲ့သည် ။ MP-4 လေးက ပါဝါပွင့်နေပြီး Screen ပေါ်မှ အရုပ်တွေက လှုပ်ရှားနေကြသည် ။ ထို MP-4 လေးကြောင့်လည်း စုစုလဲ့ တစ်ယောက် နေလင်းကို နှိုဖို့ တုန့်ဆိုင်းသွားရခြင်းပင် ဖြစ်သည် ။
MP-4 က နားကျပ်နှင့်တွဲလျက် ဖြစ်နေပြီး နားကျပ်တစ်ဖက်က နေလင်း၏ နားမှာ တပ်လျှက်သား ။ နေလင်းကတော့ တရှုးရှုးနဲ့ အိပ်ပျော်နေဆဲပင် ။
စုစုလဲ့ အသက်ကို မရှုမိအောင် သတိထားပြီး နေလင်း၏ နားမှကျန်နေသည့် နားကျပ်တစ်ဖက်ကို ဖြုတ်လိုက်သည် ။ ပြီးနောက် နားကျပ်ကို သူမနားမှာတပ်ပြီး MP-4 လေးပေါ်တွင် လှုပ်ရှားနေသည့် ရုပ်ပုံများကို အသံနှင့်အတူ တွဲဖက်ခံစားကာ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုလိုက်မိတော့သည် ။ အိမ်ပြန်နောက်ကျမှာ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည့် စုစုလဲ့ တစ်ယောက် အိမ်ပြန်ဖို့မေ့ကာ စိတ်ဝင်တစားဖြစ်စေခဲ့ရသည့် MP-4 လေးပေါ်မှ လှုပ်ရှားနေသည့် ပုံရိပ်တွေကတော့ ….. ။
ကျမ နေလင်းကို နှိုဖို့အခန်းထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ ကောင်လေးက အပြင်မှာ သောက်စားလာပြီး အနည်းငယ်မူးလာကာ အခန်းမှာ ကျမ အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အထိ စောင့်ရင်း MP-4 ထဲသွင်းထားတဲ့ အပြာကားခေါ် ကားမဆက်ဆံမှု သရုပ်ပြကားတွေကြည့်ပြီး အိပ်ပျော်လို့ နေသည် ။ ဘေးမှာလည်း လက်တစ်ဝါးလောက် ရှိသည့် စာအုပ်သေးသေးလေးတွေ သုံးလေးအုပ်လည်း ရှိနေပြန်သည် ။
ကျမကို အထူးစိတ်ဝင်စားသွားစေသည့် အရာကတော့ MP-4 လေးပင်ဖြစ်သည် ။ အပြာကားကြည့်ပြီး မူးမူးနဲ့ အိပ်ပျော်သွားခြင်းကြောင့် နေလင်းက MP-4 လေးကို မပိတ်ထားနိုင်ခဲ့ ။ ထို့ကြောင့် ကျမမှာ MP-4 ထဲမှာ အဲဒီ အပြာကားကို အမှတ်တမဲ့ မြင်မိပြီး စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။
ကျမက လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံရှိသည့် အိမ်ထောင်သည် မိန်းမတစ်ယောက်ပါ ။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်နဲ့ အတူ လိင်ဆက်ဆံမှု အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူပါ ။ ဒါပေမယ့် အခုလို အပြာကားခေါ်တဲ့ မိန်းမနဲ့ ယောကျာ်း လိုးပြနေကြပုံကို ရိုက်ကူးထားသည့် video ကိုတော့ တစ်ခါမှ မကြည့်ခဲ့ဖူးတာကြောင့် နေလင်းရဲ့ MP-4 လေးပေါ်က လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားသွား ခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်၏ ။
ကျမကြည့်လိုက်မိတဲ့ အချိန်မှာ ဂျပန်လား ၊ တရုတ်လား ကိုးရီယားလား မသိတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို အမေရိကန် ယောကျာ်းကြီး တစ်ယောက်က စက်ရုံတစ်ရုံရဲ့ အခန်းအတွင်းရှိ ခုံပေါ်မှာ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် လိုးနေမှုကို ရိုက်ပြထားတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ် ။ မြင်လိုက်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေက တကယ့်ကို ရမက်ထန်စရာပါပဲ ရှင် ။ ယောကျာ်းကြီးက ကောင်မလေးကို ဖင်ကုန်းခိုင်းထားပြီး လိုးနေရင်းမှ ဘာတွေပြောနေသလဲ မသိပါဘူး ။ ကောင်မလေးကလည်း ဖင်ကုန်း အလိုးခံနေရင်း နောက်သို့ လှည့်လှည့် ပြီး စကားပြန်ပြောရင်း အလိုးခံနေပါတော့တယ် ။
ရမက်ထန်ပြင်းစွာနဲ့ လိုးနေကြတဲ့ သူတို့ကိုကြည့်ရင်း အသံတွေကိုပါ နားထောင်ချင်လာပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် MP-4 မှာ တွဲလျက်ရှိနေပြီး တစ်ဖက်က ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျ၍ တစ်ဖက်က နေလင်း၏နားမှာပင် တပ်ထားဆဲဖြစ်သည့် နားကျပ်ကို ဖြုတ်ပြီး ကျမနားမှာ တပ်ကာ အဲ့ဒီအပြာကားကို ဆက်ကြည့်နေမိပါ တော့တယ် ။
လိုးနေခံနေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ သူတို့ဆီမှ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ အသံကို ပီပီပြင်ပြင်မြင်ရကြားရတော့ ကျမမှာ တစ်ကိုယ်လုံး ပူနွေးထူပူသွားပြီး စိတ်ထဲမှာ ရမက်စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာမိပါတယ် ။ အပြာကားက နော်ကဆုံးအခန်းမို့လို့လား တော့မသိ ။ ပိုမိုကြမ်းတမ်းလာပြီး ပို၍လည်း ရမက်သွေးကြွစရာ ကောင်းလောက်အောင် သရုပ်ဆောင်မှုတွေ ပီပြင်လာတယ် ။
“အိုး … ရက်စ် …. ရက်စ် … fuck me … အိုး … ရက်စ် … ”
ကောင်မလေးက သူမကို လိုးပါဟု တစာစာပြောရင်း ဖင်ကုန်းအလိုးခံရင်း အော်ဟစ်နေသံ ၊ အရသာတွေ့ ဖီလ်းတက်နေသံက ကျမနားထဲ ပီသသဲကွဲစွာ ကြားနေရသည် ။ ထိုအသံက ကျမကို စိတ်ထကြွစေရသည် ။
ခဏကြာတော့ ယောကျာ်းကြီးက ကောင်မလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ သူ၏လီးတန် ရှည်ရှည်တုတ်တုတ်ကြီး ကို ထုတ်လိုက်ပြီး လက်ဖြင့်ဂွင်းတိုက်ကာ လရည်ပျစ်ပျစ်ခဲခဲ တွေကို ကောင်မလေးရဲ့ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီး အပေါ် ပက်ဖြန်းပေးလိုက်တော့သည် ။
ကျမတစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွှေးညင်းထသွားရပြီး စောက်ဖုတ်ထဲမှလည်း စစ်ကနဲဖြစ်ကာ မရိုးမရွခံစာလာရသည် ။ ယောကျာ်းလီးရဲ့ အရသာ ၊ အလိုးခံရသည့် အရသာကို ကောင်းကောင်းခံစာဖူးသည့် ကျမအဖို့ ဒီအပြာကားကို ကြည့်ပြီး ရမက်သွေးတွေ ပိုမိုဆူပွက်လာစေရသည် ။
ယောကျာ်းနဲ့ မဆက်ဆံဖြစ်သည့် အချိန်တွေက ကြာနေပြီမို့ ရမက်စိတ်တွေကို ချိုးနှိမ်ထားခဲ့ရသည့် ကျမမှာ အခုတော့ အပြာကားကို ကြည့်မိပြီး စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင် ထကြွလာရသည် ။
ကျမ နေလင်းကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည် ။ အခုအချိန် နေလင်း ရုတ်တရုတ်ထလာပြီး ကျမကို ဆွဲလိုးလိုက်မယ် ဆိုရင် ကျမ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ အလိုးခံလိုက်မိမှာ သေချာပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ငတိက အိပ်ပျော်နေဆဲ ။ သူ့ကို နှိုးပြီး လိုးပေးဖို့ တောင်းဆို ၊ ခံပစ်လိုက်ချင်သည့် အတွေးပင် တွေးလိုက်မိသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် မဖြစ် ၊ ကျမက ဒီ company မှာ သူဌေးပြီးရင် ရာထူးအကြီးဆုံး မိန်းမ တစ်ယောက် ၊ နေလင်းက company ရဲ့ ပြာတာ အဆင့်သာရှိသူ ။ ကျမ အဲဒီလောက်ထိတော့ သိက္ခာမမဲ့ချင် ။ ထို့ကြောင့် ရမက်စိတ်ရိုင်း တွေကို ချွန်းအုပ်ပြီး လက်ထဲမှ MP-4 လေးကို အောက်သို့ချရန် ပြင်လိုက်တော့သည် ။
ကျမလက်က တုန့်ဆိုင်းသွားရပြန်သည် ။ ခန ကောင်မလေးနဲ့ ယောကျာ်းကြီးတို့ လိုးကြတဲ့ အခန်းပြီးသွားတော့ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း တစ်ခုပေါ်လာပြန်သည် ။ ကျမ စိတ်ဝင်စားသွားမိပြန်ပါတယ် ။ နေလင်းရဲ့ MP-4 ထဲမှာ အပြာကားတွေ ဘယ်လောက်များထည့်ထားသလဲ မသိ ။ အဲ့ဒီ အပြာကားတွေကို ကျမ ကြည့်ချင်နေမိသည် ။ ကျမ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို လျင်မြန်စွာ ချလိုက်မိပါတယ် ရှင် ။ အဲဒါကတော့ နေလင်းရဲ့ MP-4 လေးကို ကျမ အပိုင်သိမ်းလိုက်ဖို့ပါပဲ ။ ဒီည အဖို့တော့ အဲဒီ့ MP-4 လေးထဲက အပြာဇာတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ထဲ လွင့်မျောမယ်လို့ ကျမစိတ်ကူးလိုက်ရင်း … ။
စုစုလဲ့ ထိုနေ့ညက တက္ကစီငှားကာ အိမ်ပြန်ခဲ့သည် ။ တံခါးကိုတော့ အတွင်းမှလောခ်ချ၍သာ ပိတ်ပြီး နေလင်းကို မနှိုးဘဲ ထားခဲ့ပစ်လိုက်မိသည် ။ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုလျှင် ရုံးခန်းအဝင်ဝ သံဘာဂျာတံခါးကို သော့ခတ် ၊ အတွင်းကျွန်း တံခါးကို လောခ်ချပြီး အိပ်ရပေမည် ။ အခုတော့ company တစ်ခုလုံး၏ လုံခြုံရေးကိုတောင် သတိမထားနိုင်ခဲ့ပဲ စုစုလဲ့ တစ်ယောက် ရမက်စိတ်ကို ဦးစားပေးခဲ့ပြီး အသိမဲ့ခဲ့လေသည် ။
အိမ်ရောက်တော့လည်း အိပ်ခန်းထဲတန်းဝင်ပြီး နေလင်းရဲ့ MP-4 လေးထဲက အပြာကားတွေကို ကြည့်ရင်း ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကို ကိုယ့်ဘာသာပွတ်သပ်နှိုက်ဆွ အာသာ ဖြေကာ တစ်ညလုံး မိုးလင်းပေါက်နီးပါး ရမက်သွေးတွေ ထကြွနေခဲ့၏ ။ ဘယ်နှစ်ချီမြောက်မှန်း မသိ ဖီးလင်တွေတက် ပြီး ပြီးသွားကာ မောမောနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတော့ မနက် ငါးနာရီပင် ထိုးတော့မည် ။
စုစုလဲ့ အရမ်းကို ဏှာထန်သည့် မိန်းမမျိုးတော့ မဟုတ် ။ ဒါပေမယ့် လင်ယောကျာ်းနဲ့ ကင်းကွာနေရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် စိတ်မထိန်းနိုင်လောက်အောင် ကာမ စိတ်လှုံဆော်ခြင်းခံရသည့် အခါ၌ ထိုသို့ပင်ဖြစ် သွားရခြင်း ပင်ဖြစ်သည် ။
နောက်တစ်နေ့ မနက် ရုံးရောက်တော့ စုစုလဲ့ တစ်ယောက် နေလင်းကို မသိမသာ အကဲခတ်လိုက်သည် ။ နေလင်းတစ်ယောက် ရုံးကလူတွေ ခိုင်းသည့်ကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေသည် ။ အလုပ်ပါးသွားတော့မှ နေလင်း စုစုလဲ့ အနားသို့ရောက်လာသည် ။
“အစ်မ … ကျနော် ညက အိပ်ပျော်သွားတယ် … အစ်မ ဘယ်လိုပြန်သွားတာလဲ … အဆင်ပြေရဲ့လား … ”
“အင်း … ပြေပါတယ် … မင်းကိုခေါ်ကြည့်တော့ အသံမကြားတာနဲ့ ကားငှားပြီးပဲ ပြန်သွားတာ … ”
“ဆောရီးပါ … အစ်မရယ် … ကျနော် ညက နဲနဲကောင်းသွားလို့ … ဟဲဟဲ … ”
နေလင်း အမေးကို စုစုလဲ့က ဟန်ဆောင်ကောင်းစွာဖြေသည် ။ နေလင်းက သူ၏ MP-4 ကို စုစုလဲ့ ယူသွားတာ သိပုံမပေါ်သောကြောင့် စုစုလဲ့ ရင်ထဲပေါ့သွား ရသည် ။ ထို MP-4 ကို စုစုလဲ့ ရုံးသို့ပြန်မယူလာခဲ့ ။ သူမမှာ ထိုအထဲမှ အပြာဇာတ်ကားတွေ ကိုကြည့်လို့ မဝနိုင်သေး ။ လောလောဆယ် နေလင်းရဲ့ MP-4 ကို မသိမသာ ပြန်ထားဖို့ စိတ်ကူးပင်မရှိ ။
“နေလင်းရေ … အန်တီနွဲ့ကို ကားအချိန် ဇယားတွေ မိတ္တူကူးပေးအုံး … ”
“ဟုတ်ကဲ့ … အန်တီနွဲ့ … ”
နေလင်း အပြေးလေးထွက်သွားတော့ မှ စုစုလဲ့ သက်ပြင်းချနိုင်သည် ။ MP-4 ကို နေလင်း မသိအောင် သူအိပ်သည့် အခန်းထဲ ပြန်ထားသင့်တယ်ဆိုတာ စုစုလဲ့ သိပေမယ့် သူမရဲ့ ရမက်စိတ်လှုံဆော်မှုကြောင့် လောလောဆယ် အပိုင်သိမ်းထားဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်နေမိသည် ။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်က ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်ကျော် လောက်ဖြစ်သွားခဲ့သည် ။ ထိုကာလ အတွင်း လင်ဖြစ်သူ ပြန်ရောက်လာသဖြင့် စုစုလဲ့ တစ်ယောက် ပျော်ရွင်သွားခဲ့ရသည် ။ ဒါပေမယ့် လင်ဖြစ်သူက မနက်အစောကြီး ကားထွက်ရအုံးမည် ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် သူမဆန္ဒတွေကို ပြည့်ဝအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ ။ စုစုလဲ့မှာ ထိုတစ်ပတ်အတွင်း ညစဉ်တိုင်း နေလင်း၏ MP-4 လေးထဲမှ အပြာကားတွေကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ရမက်စိတ်တွေကို ဖြေဖျောက်နေခဲ့ရလေသည် ။
လင်ဖြစ်သူက တစ်ညသာအိပ်ပြီး ခရီးပြန်ထွက်သွားခြင်းကြောင့် သူမရဲ့ လိုအင်ရမက်တွေကို သူမဘာသာ ဖြေဖျောက်နေခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏ ။ ထို့အပြင် အိမ်ထောင်သက်က လည်း ငါးနှစ်ကျော်ပြီမို့ လင်ရောမယားပါ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ပါးလာရခြင်းဖြစ်သည် ။
ယောကျာ်းနှင့် မိန်းမ ကွဲပြားချက်မှာ ယောကျာ်းတွေက ကိုယ့်ရဲ့ မိန်းမအပေါ် အိမ်ထောင်သက် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် လျော့ပါးလာတတ်ကြသည် ။ အချို့ ယောကျာ်းများဆိုလျှင် ကိုယ့်မိန်းမနဲ့ နောက်ဆုံးဘယ်နေ့က အတူဆက်ဆံခဲ့သည်ကိုပင် မေ့နေတတ်ကြ၏ ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိန်းမ မဟုတ်သည့် မိန်းမ တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့ရမည်ဆိုလျှင်တော့ ထိုယောကျာ်း၏ ရမက်စိတ်က သာမာန်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်တတ်ကြသည် ။
မိန်းမတွေကျတော့ ထိုသို့မဟုတ် ။ မိမိယောကျာ်း အပေါ် လိင်စိတ်လျော့ပါးနေသည် ဆိုသော်လည်း ထိတွေ့ ဆက်ဆံမိကြချိန်တွင် စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် ကာမ စည်းစိမ်ကို ခံစားတတ်ကြသည် ။ ယောကျာ်းတွေလို ကိုယ့်မိန်းမနဲ့ ဆက်ဆံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ပွတ်းသပ်နူးဆွခြင်း ၊ နမ်းရှုပ်ခြင်း များပင် မပြုလုပ်ပဲ တက်ခွ လိုးပစ်တတ်ကြသည် မဟုတ် ။ အလိုးခံရသည့် ဖီလင်အပေါ် တကယ့်ကို အရသာခံစားတတ်ကြသည့် အမျိုးပင် ဖြစ်သည် ။
စုစုလဲ့၏ ယောကျာ်းမှာ အဝေးပြေးကားမောင်းရင်း လမ်းခရီးရှိ မြို့ တစ်မြို့ မှ ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိ တစ်ခုလပ် မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ဖြစ်နေသည့်အတွက် စုစုလဲ့အပေါ် ဆက်ဆံချင်စိတ် လျော့ပါးနေသည် ဆိုတာကို စုစုလဲ့ ခမျှ မသိရှာပေ ။
စုစုလဲ့မှာ လင်ဖြစ်သူနှင့် ကာမဆက်ဆံချင်စိတ် ၊ လိင်စိတ်လျော့ပါးနေခဲ့ပြီမှန်သော်လည်း တစ်ကယ့်တစ်ကယ် အလိုးခံသည့်အခါတွင်မတော့ ကာမအရသာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားချင်သည် ။ ဒါပေမယ့် သူမဆန္ဒတွေကို ပြည့်ဝအောင် လင်ဖြစ်သူက မစွမ်းဆောင်ပေးသည့်အခါ နေလင်း၏ အပြာဇာတ်ကားများကိုသာ ကြည့်၍ အသာဆန္ဒ ဖြေဖျောက်မိခြင်းဖြစ်သည် ။
အပြာဇာတ်ကားများထဲမှ သူမ မမြင်ဖူး မတွေ့ဖူးသည့် ကာမဆက်ဆံခြင်းနည်းသစ်များ ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အလိုးခံသည့် ပုံစံသစ်များကို တွေ့မြင်သိရှိနားလည် လာခဲ့ရတော့သည် ။ ထိုနားလည် သိရှိမှုနှင့်အတူ ထိုသို့သော ပုံစံမျိုးများနှင့် အလိုးခံကြည့်ချင်စိတ်များလည်း ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ရ၏ ။
သူမ အသွေးအသားတွေထဲ ရမက်သွေးတွေ ဆူပွက်နေချိန်၌ လင်ဖြစ်သူက အနားမှာမရှိ ။ ဒီတော့ စုစုလဲ့မှာ ညဘက် အပြာကားတွေကြည့် ဖီလင်တွေတက်ပြီး မရိုးမရွ ဖြစ်ခဲ့ရသည့် ညတွေများလာခဲ့သည် ။ မနက်ရုံးရောက်တော့ အလုပ်ထဲ စိတ်ကိုနှစ်ထားပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါ ရမက်သွေးတွေ လှုပ်ရှားနေမှုကို ခံစားရကာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို တောင့်တမိသည် ။
ဒါပေမယ့် သူမတို့ရုံမှာက ယောကျာ်းသား သိပ်မရှိ ။ ဝန်ထမ်းအင်အား ( ၁၀ ) ယောက်မှာ ( ၇ )ယောက်က မိန်းမတွေဖြစ်သည် ။ ကျန် ( ၃ ) ယောက်က ဖယ်ရီမောင်းသည့် အသက် ( ၅၅ ) နှစ်လောက်ရှိပြီ ဖြစ်သော ဦးစောသာ ဆိုသည့် အဖိုးကြီး ။ ကျန်တစ်ယောက်က အဝေးပြေးဝင်းတွေ သွားပြီးကားကွက်ချ ၊ ကုန်တွေစစ်ပြီး အော်ဒါတင်ပို့ပေးရသည့် အသက် ( ၃၈ ) နှစ်ခန့် ကိုညီနိုင်ဆိုသည့် လူတစ်ယောက် ။ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ နေလင်းတို့ပင်ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် စုစုလဲ့ အများဆုံးတွေ့မြင်နေရသူက နေလင်းသာ ရှိသည် ။
နေလင်းအပေါ်တော့ စုစုလဲ့ စိတ်ထဲ တပ်မက်စိတ် သိပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိ ။ အသက်ငယ်ပြီး အားလုံးရဲ့ခိုင်းဖက်လို ဖြစ်နေသည့် နေလင်းကို တဏှာစိတ်ဖြင့် သိပ်ပြီး စိတ်ကူးယာဉ်လို့ မရ ။ စုစုလဲ့မှ ကာမသွေးဆိုးတွေ ခန္ဓာကိုယ် ထဲစီးဆင်နေပေမယ့် အဆင့်အတန်း မာနလေးက ရှိနေသေးသည် ။
ကိုညီနိုင်ဆိုသည့် လူကျတော့လည်း မနက်ရုံးလာပြီး စာရွက်စာတမ်းယူကာ ထွက်သွားလိုက်သည်မှ ညနေရုံးဆင်းချိန်အထိတောင် ပြန်မရောက်တတ် ။ ထို့ကြောင့် စုစုလဲ့၏ စိတ်တွင် ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် သိပ်မဖြစ် ။
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့တော့ စုစုလဲ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အခြေအနေတစ်ခုကို ကြုံလိုက်ရသည် ။
“ဟေ့ကောင် နေလင်း … မင်းဟာ အခုထိ ပြန်မတွေ့သေးဘူးလားကွ … ငါ့ကိုပြန်ပေးအုံး … ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုညီရာ … ဘယ်လိုပျောက်သွားသလဲ မသိဘူး … ကျနော်လည်း စဉ်းစားလို့ကိုမရတာ … အဲ့ဒီညက ကျနော်ဖွင့်ကြည့်နေသေးတယ် … နောက်တစ်နေ့ ည ကြည့်မလို့ လိုက်ရှာတော့မှ မတွေ့တော့တာ …”
စတိုခန်းရှေ့ မှဖြတ်၍ သန့်စင်ခန်းဘက်သို့ သွားမည့် စုစုလဲ့တစ်ယောက် အခန်းထဲမှ စကားသံများကြောင့် ခြေလှမ်းတွေ တုန့်ဆိုင်းသွားရသည် ။ အထဲက စကားအသွားအလာကို နားထောင်မိလိုက်တာနဲ့ ဘာအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာ ဒက်ကနဲ သိလိုက်ရသည် ။ သူမက ထိုအကြောင်းအရာရဲ့ အဓိက တရားခံကိုး ။
“ရုံးမှာလည်း မိန်းမတွေချည်းပဲ … ဒီအခန်းထဲလည်း တော်ရုံလူ ဝင်တာမဟုတ်ဘူး … နောက်ပြီး မင်း MP-4 ကို ညအိပ်ချိန်ပဲ ထုတ်ကြည့်တာ မဟုတ်လား …”
“အင်း … ဟုတ်တယ် ကိုညီရ … ကျနော်တော့ အထားမမှားတာ သေချာတယ် … အဲဒီညက မူးလာတယ် ဆိုပေမယ့် ကျနော်ကြည့်ဖြစ်သေးတယ် … အောစာအုပ်တွေလည်း ရှိတာပဲ … စာအုပ်တွေတော့ မပျောက်ဘူး … ”
“အဲ့ဒီညက ရုံးမှာ ဘယ်သူရှိလဲ … ”
“အင်း … အစ်မပဲရှိတာ … အလုပ်မပြီးလို့ လုပ်နေတာ သူပြန်ရင်တောင် လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး လုပ်နေသေးတယ် ကျနော်အိပ်ပျော်သွားလို့ အစ်မဘာသာပြန်သွားတာ … ”
စုစုလဲ့မှာ အခန်းအပြင်က ခိုးနားထောင်နေရင်း အဲ့ဒီညက အဖြစ်အပျက်ကို နေလင်းကပြန်ပြောပြရင်း သူမအကြောင်းပါလာသည်မို့ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်လာသည် ။
“ဟင် … ငါယူသွားမှန်း သိများသိသွားမလား … အဲ့ဒါကို ပြန်ထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ် … အခုတော့ … ”
စုစုလဲ့စိတ်ထဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကျိန်ဆဲရင်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်လာမိသည် ။ MP-4 ကို သူမ ယူသွားမှန်း သိသွားရင် အရှက်တကွဲနဲ့ သိက္ခာကျမှာကို တွေးမိပြီး စိုးရိမ်လာရခြင်းဖြစ်သည် ။
“မလဲ့တစ်ယောက်ပဲ အဲဒီနေ့က နောက်ကျတာပေါ့ ဟုတ်လာနေလင်း …”
“ဟုတ်တယ် ကိုညီ … ဒါပေမယ့် အစ်မတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ … ”
“အင်း … မင်းသေချာတော့ ပြန်ရှာကြည့်လိုက်အုံး … ငါ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဝင်းထဲ ခဏပြေးလိုက်အုံးမယ် … ”
စုစုလဲ့ အခန်းအပြင်မှ ကသုတ်ကရိုက်ဖြင့်ပင် သူမရုံးခန်းထဲသို့ ပြန်ပြေးလိုက်ရသည် ။ ရင်တွေလည်း တဒိန်းဒိန်းခုန်နေရသည် ။
“မဖြစ်ဘူး … မဖြစ်ဘူး … ငါ အဲ့ဒီ MP-4 ကိုပြန်ယူလာပြီး နေလင်းမသိအောင် သူ့အခန်းထဲပြန်ထည့်ထားမှ ဖြစ်တော့မယ် … အဲ့ဒီ MP-4 က ကိုညီနိုင် ဟာများလား မသိဘူး … ”
စုစုလဲ့ တစ်ဦးထဲ ရေရွတ်ရင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက် တော့သည် ။ နောက် တစ်နေ့ရုံးတက်တော့ စုစုလဲ့ တစ်ယောက် ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေရသည် ။ တစ်နေ့ခင်းလုံး MP-4 လေးကို ဘယ်လိုပြန်ထားရမလဲ ဆိုတာပဲ တွေးနေမိ၏ ။ နောက်ဆုံး ညနေ အများတွေရုံးဆင်းသွားတော့မှ စတိုခန်းထဲဝင်ပြီး မသိမသာထားခဲ့လိုက် မည်ဟု စိတ်ကူးရမိတော့သည် ။
“နေလင်းရေ … ”
“ဗျာ အစ်မ … ဘာခိုင်းမလို့လဲ … ”
ရုံးဆင်းချိန်ကျော်သွားတဲ့ အထိ စုစုလဲ့ မပြန်သေးဘဲ အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်ကာ ရုံးထဲ နေလင်းတစ်ယောက်တည်း ရှိနေသည့် အချိန်ကျမှ လှမ်းခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။
“အစ်မကို အပြင်မှာ စားစရာတစ်ခုခု သွားဝယ်ပေးစမ်းကွယ် … အဆာပြေပေါ့ … ဒါနဲ့ အကုန်ပြန်သွားကြပြီလား …”
“ပြန်သွားကြပြီအစ်မ … ကိုညီနိုင်ကတော့ အောင်မင်္ဂလာဝင်းထဲမှာ … အလုပ်စောပြီးရင် ဝင်ခဲ့မယ်လို့တော့ ပြောတာပဲ … အခုချိန်မှတော့ မလာလောက်တော့ဘူး ထင်တယ် … ”
“အော် … အေး … အေး … ကဲကဲ … အစ်မဖို့ တစ်ခုခု သွားဝယ်ပေးပါအုံး … ”
အမှန်တော့ ထွက်သွားသည်နှင့် စုစုလဲ့တစ်ယောက် သူမ စလင်းဘက်အိတ်ထဲမှ MP-4 ကို ထုတ်ယူကာ စတိုခန်းထဲ အမြန်ပြေးတော့သည် ။ ထို့နောက် ချောင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို အသဲအသန် ရှာဖွေသည် ။ ဒါမှ နေလင်း တစ်ယောက် ရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့ MP-4 လေးကို ပြန်တွေ့ပြီး သူအထားမှားသွားသည်ဟု အထင်ရောက်စေရန် ဖြစ်သည် ။
နေလင်းအိပ်ယာဘေးရှိ ကတ္တူစက္ကူပုံးတွေကြားထဲသို့ သင့်တော်သည့် နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ MP-4 ကိုချထားခဲ့လိုက်သည် ။ ထိုအခါမှပင် စုစုလဲ့တစ်ယောက် စိတ်ပေါ့ပါးသွားကာ စတိုခန်းထဲမှ ပြန်ထွက်လာခဲ့တော့သည် ။ သူမရုံးခန်းထဲပြန်ရောက်တော့ နေလင်းပြန်ရောက်လာလျှင် အဆင်သင့် ပြန်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်သည် ။ စလင်းဘက်အိတ်ထဲမှ ရုံးဆင်းပြန်ချိန်တိုင်း ကြည့်လေ့ရှိသည့် မှန် အဝိုင်းလေးကို ထုတ်ယူဖို့ ပြင်လိုက်စဉ်မှာတော့ …
စုစုလဲ့ ပြာသွားရပြန်သည် ။ MP-4 ကို သူမယူခဲ့စဉ်က နားကျပ်ပါ တွဲလျက်ပါလာခဲ့သည် ။ ခု ထိုနားကျပ်က သူမအိတ်ထဲ ကျန်နေသေး၏ ။ စုစုလဲ့ ထိုနားကျပ်ကို ပြန်သွားထားဖို့ ပြင်ရပြန်သည် ။ အမှန်ဆို နားကျပ်ကို ပြန်မထားလည်း ရသည် ။ ဒါပေမယ့် စုစုလဲ့က အမှားတစ်ခုပြုလုပ်ထားပြီး မလုံမလဲ ဖြစ်နေသူမို့ နားကျပ်ကို MP-4 နှင့်အတူ တွဲပြန်ထားဖို့ လုပ်ဆောင်နေမိခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည် ။
စတိုခန်းထဲသို့ စုစုလဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ရောက်ရပြန်သည် ။ ခုန သူမထားခဲ့သည့် နေရာမှ MP-4 ကိုပြန်ရှာပြီး နားကျပ်ပေါက်ထဲသို့ ပြန်တပ်လိုက်သည် ။ ထိုစဉ်မှာပင် …
“အဲဒီ MP-4 က ဘယ်လိုမှ ပျောက်စရာမရှိပဲ ပျောက်သွားတာ တစ်ယောက်ယောက်လက်ချက်လို့ ကျုပ်ထင်တော့ ထင်သားပဲ … ဒါပေမယ့် မလဲ့ လို့တော့ မထင်ခဲ့မိဘူး ဖယ်ရီကား မောင်းတဲ့ ဦးစောသာကြီးနဲ့ အပျိုကြီး မနုလို့ ထင်ခဲ့တာ … အခုတော့ … ”
“ကို … ကိုညီနိုင် … ”
“ဟဲဟဲ … လန့်သွားတာလား … မစိုးရိမ်ပါနဲ့ … ကျနော် ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောပါဘူး … ”
စုစုလဲ့ တစ်ယောက် ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့ကို မိနေခဲ့ပေပြီ ။ သူမအဖို့တော့ ကျားရှေ့ မှောက်လျက်လဲကျမိ သလိုပင် ဖြစ်နေချေသည် ။ ညီနိုင်ဆိုသည့် ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရှေ့ မှာ မိန်းမတစ်ယောက် မကြည့်အပ်တဲ့ အပြာကားတွေပါသည့် MP-4 တစ်ခုကို ကိုင်လျက်သားရှိလို့နေသည် ။ နောက်ပြီး ထို MP-4 က သူမခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ယူထားသည့် အရာ ။
စုစုလဲ့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေရတော့သည် ။ သူမအဖြစ်က ရှက်စရာကောင်းလှသလို မိမိထက် အဆင့်နိမ့်သည့် လက်အောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရှေ့ မှာ အပြစ်ရှိသူလို သိမ်ငယ်စွာ ရပ်နေရသည့် အဖြစ် ။
“ပြောပါအုံး မလဲ့ရဲ့ … အဲ့ဒီထဲက ဘယ်အခန်းကို မလဲ့ ကြိုက်လဲ … အဲ့ဒီကားတွေကြည့်ပြီး အလဲ့ယောကျာ်းနဲ့အတူ လုပ်ကြည့်ကြသေးလား … ”
အမြဲတမ်း သူမကို တရိုတသေပြောဆိုဆက်ဆံရသည့် သူမ၏ လက်အောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ရင့်ရင့်သီးသီး မေးလာသည့် အမေးစကားကို စုစုလဲ့ ပြန်မဖြေနိုင်သလို ရာထူးအရှိန်အဝါလည်း ပြလို့မရနိုင် ဖြစ်နေရသည် ။
ညီနိုင်က စုစုလဲ့ အနီးသို့ အေးဆေးစွာပင် တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်လာသည် ။ သး၏ မျက်လုံးတွေက ဖမ်းမိထားသော သားကောင်ကို စားသောက်ဖို့လာနေတဲ့ ကျားရဲတစ်ကောင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေလို အထက်စီးဆန်လွန်းနေသည် ။
“မလဲ့ … ”
“ရှင် … ရှင် ကိုညီနိုင် ”
“အခုအဖြစ်အပျက်တွေကို ရုံးကလူတွေ သိသွားရင် မလဲ့ သိက္ခာကျသွားမှာနော် … သူတို့တွေကို ပြောပြလိုက် ရမလား … ”
“အို … အဲလို မလုပ်ပါနဲ့ ကိုညီနိုင်ရယ် … ကျမ တောင်းပန်ပါတယ် … ”
“ဒါဆို … ”
ညီနိုင်က စကားကို ဆက်မပြောတော့ ။ ယုန်သူငယ်လေးလို မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ ထိတ်လန့်သည့် အသွင်ဖြစ်နေသော စုစုလဲ့ကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲဖက်လိုက်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည့် နူတ်ခမ်းတွေကို ဆွဲစုပ်၍ နမ်းလိုက်တော့သည် ။
“ပြွတ် … ပြွတ် … အွန်း … ဟွန်း … မလုပ် … မလုပ်ပါနဲ့ ကိုညီနိုင်ရယ် … ကျမတောင်းပန်ပါတယ် … ”
“ကျုပ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်လို့မရရင် ရုံးထဲမှာ ခင်ဗျားအကြောင်းကို ဖွလိုက်မယ်နော် … ခု ကျုပ် ခင်ဗျားကို လိုးမယ် … ကောင်းကောင်းမခံရင် ခင်ဗျား အရှက်ကွဲပြီသာမှတ် … ဘယ်လိုလဲ … ”
အတင်းရုန်းကန်ပြီး အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်တောင်ပန်နေသည့် စုစုလဲ့ကို ညီနိုင်က အပိုင်အနိုင် ခြိမ်းခြောက် အကျပ်ကိုင်ပစ်လိုက်သည် ။ စုစုလဲ့ တစ်ယောက် အပြင်းအထန် စဉ်းစားရပေပြီ ။ ခု ညီနိုင်၏ ဆန္ဒကို ငြင်းဆန်လိုက်လျှင် သူမမှာ ရုံးထဲ၌ ရာထူးအကြီးဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေရမှုမှ လျော့ပါးသွားနိုင်သည် ။ အခြားစိတ်ခံစားမှုအရလည်း ညီနိုင်၏ သဘောဆန္ဒကို လိုက်လျောချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေပြန်သည် ။ တစ်ပတ်နီးပါး အချိန်ကာလမှာ အပြာဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေခဲ့သည်ကြောင့်လည်း ထိုသို့သောစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည် ။ ညီနိုင်အလိုကို လိုက်မိပြန်လျှင်လည်း ညီနိုင်၏ ကြိုးဆွဲရာ ကရမည့် ကာမရုပ်သေးတစ်ရုပ် ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းလည်း စဉ်းစားမိနေ၏ ။
“ကဲ … အချိန်မရှိဘူးဗျာ … ကျုပ် ရုံးထဲမှာ ဖွလိုက်ရ မှာလား ”
“အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ရှင် … ကျမ … ကျမ ရှင့် ဆန္ဒ … ”
“ကျုပ်လိုးတာကို ခံမယ်ပေါ့ … ဟုတ်လား …. ”
“ဟုတ် … ဟုတ်ကဲ့ … ”
ညီနိုင်က စုစုလဲ့ကို ကိုယ့်အထက်အရာရှိ လူကြီးတစ်ယောက်လို့ မမြင်တော့ပဲ သူလိုးရတော့မည့် မိန်းမ တစ်ယောက် အဖြစ်အထက်ဆီးမှ ပြောဆိုဆက်ဆံလိုက်သည် ။
“ကဲ … ဒါဆိုလည်း … လာ ”
ညီနိုင်က စုစုလဲ့ကို လက်ဆွဲပြီး အခန်းထောင့်သို့ ခေါ်သွားသည် ။ ထိုနေရာက နေလင်းအိပ်သည့် နေရာဖြစ်၏ ။
“အဲ့ဒီဖျာကို ခင်းလိုက် … အပေါ်က စောင်ပါဖြန့်ခင်း … အဲ့ဒီ ယိုးဒယားဖျာတွေက ဒူးထောက်လိုက်ရင် နာတယ် … ”
ညီနိုင်က ရင့်သည် ။ ကိုယ်လိုးရမည့် မိန်းမကို လိုးဖို့နေရာပြင်ခိုင်းနေ၏ ။ ဒါပေမယ့် စုစုလဲ့ စောဒက မတက်ရဲ ။ သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုလို အဖြစ်အပျက်ကို ကြုံတွေ့နေရသည့် အချိန်၌ မသိစိတ်မှ ရမက်စိတ်များကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရလေသည် ။
စုစုလဲ့ ဖျာခင်းပြီး ကုန်းကုန်းကွကွဖြင့်ပင် ယိုးဒယားဖျာချပ်ပေါ်သို့ စောင်ကို ဖြန့်ခင်းသည် ။ စုစုလဲ့ ဖင်ကုန်းပြီး အိပ်ယာခင်းနေသည့် ပုံကို ညီနိုင်က မက်တပ်ရပ်ကြည့်နေပြီး သူ၏ ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲဖြုတ်ကာ တောင်မတ်နေပြီဖြစ်သည့် လီးကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်နေ၏ ။
စုစုလဲ့မှာ အိမ်ဖော်မလေးအသွင် လေးဘက်ထောက်ကာ အညာစောက်လေးကို ဖျာပေါ်ဖြန့်ခင်းနေသည် ။ စုစုလဲ့ ဝတ်ထားသည့် ရုံးယူနီဖောင်း ထမီစကပ်အောက်မှ တင်းကားထွက်နေသည့် ဖင်အိုးကြီးကို ကြည့်ပြီး ညီနိုင် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ ။
“အစကတော့ ခင်ဗျားကို ကောင်းကောင်းကိုင်ပြီးမှ လိုးမလို့ပဲ … အခုတော့ ခင်ဗျား ဖင်အိုးကြီး တင်းကားထွက်နေတာကို ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ … အဲ့ဒီ့အတိုင်း ဖင်ကုန်းနေလိုက် … ”
ညီနိုင်က ပြောပြောဆိုဆို စုစုလဲ့ဖင်နောက်သို့ ကပ်သွားပြီး ထမီစကပ်ကို မရရအောင် အတင်းဆွဲလှန်တင်ပစ်လိုက်သည် ။ စုစုလဲ့ကလည်း ကမူးရှုးထိုးလုပ်နေသည့် ညီနိုင်၏ ဆန္ဒအတိုင်း ကူညီကာဖြင့် သူမ၏ ထမီစကပ်ကို ခါးဆီသို့ရောက်အောင် လှန်တင်ပေး၏ ။
ထမီစကပ်လေး စုစုလဲ့ခါးဆီသို့ စုပုံသွားတော့ ညီနိုင်က စုစုလဲ့၏ အောက်ခံဘောင်းဘီကို ဖင်သားတစ်ဖက်သို့ ဆွဲယူကာ စောက်ဖုတ်ကိုလှပ်လိုက်သည် ။ စုစုလဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီက နောက်သို့ ပြူးထွက်နေကာ ဘောင်းဘီကို တစ်ခြမ်း ဆွဲဖယ်ထားခြင်းကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားတွေက ပူးကပ်နေကြသည် ။ ထိုစောက်ဖုတ်ကြီးဆီသို့ ညီနိုင်က သူ့လီးတန်ကြီးကို တေ့ထားထောက်လိုက်သည် ။
ဖင်ထောင်ကုန်းထားသည့် အနေအထားကြောင့် စုစုလဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီး နှစ်ခုက နောက်သို့ အစွမ်းကုန် ပြူးထွက်နေသည် ။ လီးတန်ကြီးက ထိုအပေါ်သို့ မေးတင်လို့ထား၏ ။
“ဟင့် … ကိုညီနိုင် ဖြေးဖြေးလုပ်နော် … ”
မိန်းမတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အလိုးခံဖို့ လီးသွင်းခါနီးပြောနေကျ စကားကို စုစုလဲ့က ပြောလိုက်သည် ။
ညီနိုင်က လီးတန်ကြီးကို အသာဖိကြည့်သည် ။ မဝင်သေး ၊ စုစုလဲ့ စိတ်ထနေပြီမှန်းသိသော်လည်း တဏှာရှေ့ ပြေးအရည်ကြည်များက စောက်ခေါင်းထဲမှပင် စိမ့်ထွက်နေပြီး အပြင်သို့ ထွက်ကျမလာသေးတာကြောင့် သူ၏လီးကို လိုးသွင်းရာ၌ အနည်းငယ် ခြောက်သွေ့နေသေး၏ ။ သူ၏ လီးတန်ကြီးက တုတ်ခိုင်လွန်းခြင်းကြောင့် လည်းပါပေသည် ။
ညီနိုင်က စောက်ခေါင်းဝမှာ လီးကို ဖိတေ့ထားပြီး သူ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုစုလဲ့၏ ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကို ဆွဲဖြဲလိုက်သည် ။ စုစုလဲ့ ခါးလေးယမ်းထွက်သွား၏ ။ ညီနိုင်က ထိုဖင်ကြားထဲမှာ ညပ်နေသည့် ဘောင်းဘီမှာ ပို၍ တင်းရင်းသွားပြီး စောက်ဖုတ် အရှေ့ ပိုင်းမှ စောက်စေ့လေးကို ဘောင်းဘီက သွား၍ဖိမိထား၏ ။
ညီနိုင်က ဖင်ကိုပိုဖြဲလိုက်သဖြင့် ပေါ်လာသော စအိုဝလေးအောက်ဖက် လက်နှစ်လုံးလောက်သာ ခြာသော စောက်ခေါင်းဝမှာ တေ့ထားသည့် သူ့လီးဒစ်ကြီးကို အနောက်သို့အသာဆုတ် ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ဖင်ကြားထဲသို့ တံတွေးထွေးချလိုက်သည် ။
“အင့် … ဟင့် … ဘာလို့ တံတွေးတွေ ထွေးချတာလဲလို့ … ”
“ဖင်ချမလို့ပေါ့ဗျ … ခင်ဗျာဖင်ကြီးကို ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့လို့ … ”
“ဖင် … ဖင်က ချလို့ရပါ့မလား ကိုညီနိုင်ရယ် … စောက်ဖုတ်ကိုပဲ လုပ်ပါနော် … ”
“ဟာ … ဘာလဲ ခင်ဗျားက ကျုပ်ကိုငြင်းချင်သေးတာလား … ”
“မဟုတ် … မဟုတ်ပါဘူးရှင် …. ကျမ တစ်ခါမှ မခံဘူးသေးလို့ပါ … ”
“ခင်ဗျား … ယူသွားတဲ့ MP-4 ထဲမှာ ဖင်ချတဲ့ကားတွေမှ ပုံလို့ … မကြည့်ရသေးဘူးလား … ”
“ကြည့် … ကြည့်ပြီးပါပြီ … ဟို .. ဟို ..နာမှာကြောက်လို့ … ”
“ဘာမှ … မနာဘူး …. နာရင်လည်း အောင့်ခံ … ငြိမ်ငြိမ်လေးသာနေ … ဟုတ်လား … ”
ထွေချလိုက်သည့် တံတွေးတွေက ဖင်စအိုဝ တည့်တည့်ပေါ်သွားကျပြီး အောက်သို့တဖြည်းဖြည်း စီးကျလာကာ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းမှ တစ်ဆင့် အောက်က ခင်းထားသည့် စောင်ပေါ်အထိကျသွားသည် ။ ထိုအခါမှ ညီနိုင်က သူလီကို ဖင်ဝမှာတေ့ပြီး အတင်းဖိသွင်းလိုက် တော့သည် ။
“ဗြစ် … ပြွတ် …ပလစ် … ပျစ် …ပြွတ် ..ဖွတ် … ”
“အား … အမလေး … ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ .. ကိုညီနိုင်ရဲ့ …. အ … အ… ဟင့် .. ”
စုစုလဲ့ ဖင်ကြီး ခါယမ်းသွားသည် ။ လီးက စအိုဝရှိ ကြွက်သားတွေကို အတင်းထိုးခွဲပြီး အဆုံးထိ တရှိန်ထိုး ဆောင့်ဝင်သွားခြင်းကြောင့် စုစုလဲ့ ခမျှ ဖင်ဝက အရမ်းနာသွာတာမို့ အတင်းရုန်းပြီး ထွက်ပြေး သွားလိုက်ချင်ပေမယ့် ညီနိုင်က ခါးကို အတင်းခြုပ်ပြီး ကိုင်ထား တာမို့ ရုန်းထွက်ပြေးဖို့ကလည်း အခွင့်မသာ ဖြစ်သွားရသည် ၊ ဒါကြောင့် ရုန်းမရမဲ့ အတူတူ ဖြေးဖြေးသက်သာ လုပ်ဖို့သာ တောင်းပန်ပြီး ပြောလိုက်ရတာ ဖြစ်တော့သည် ။ စုစုလဲ့ စုပ်သပ်ညီးတွားခြင်းကို ညီနိုင် ဂရုမထား ။ ဖွေးဥနေတဲ့ ဖင်သားကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး ခါးသေးသေးလေးကို လက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ စက်သေနတ်ပစ်သလို တရစပ် ဆောင့်လိုးလေတော့သည် ။
“ပြွတ် … ပြွတ် … ပလွတ် … ဘွပ် … ဗြစ် … ပလွတ် … ဘွပ် … ဖတ် … ဘွပ် … ဖတ် … ဖတ် … ”
“အ … အီး … အ … ကျွတ် … ကျွတ် … အ … အား … ရှီး … အင်း … ဟင်း … ”
အိမ်ထောင်သက် ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်သော အိမ်ထောင်သည် မိန်းမတစ်ယောက်မို့ အလိုးခံရသည့် သဘော ၊ သဘာဝကို အတော်အသင့် နားလည်နေတာကြောင့် စသွင်းသွင်းခြင်းမှာ အရမ်းကို မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် နာသွားပေမယ့်လို ညီနိုင်က စက်သေနတ်ပစ်သလို တစ်ရစပ် ဆောင့်လိုးလာသော အခါ စအိုဝရှိ ကြွက်သားတွေကို ဖြေလျှော့ကြည့်မိရင်းက အနာသက်သာလာသည် ။ စောက်ဖုတ်ကို အလိုးခံချင်စိတ် ပြင်းပြနေခဲ့ပေမယ်လို့ အသစ်ကြုံတွေ့နေရသော ဖင်လိုးခံ အရသာကိုလည်း စွဲမက်စ ပြုလာရတော့သည် ။ ညီနိုင်ကလည်း မလိုးဖူးသေးသည့် ဖင်ပေါက်မို့ သဲသဲမဲမဲ လိုးသည် ။ ထို့ကြောင့် အသံတွေက ဆူညံစွာပင် ထွက်ပေါ်လို့နေတော့သည် ။
“ဘွပ် … ဖတ် … ဖတ် … ”
“အ … အင်း … ဟင်း … အင်း ... အိုး … အ … ”
စုစုလဲ့ ဖင်သားကြီးတွေက တစ်ချက်ပြီး တစ်ချက် ဆောင့်လိုးခံလိုက်ရတိုင်း တုန်ခနဲ့ တုန်ခနဲ့ ခါနေတော့သည် ။ လီးအသွင်း အထုတ်များလာခြင်းကြောင့် အဝင်အထွက်ကလည်း အတန်သင့် ချောမွှေနေသည် ။ ညီးနိုင်က လိုးနေရင်းမှ အားမရတော့ဟန်ဖြင့် ကုန်းပေးထားသော ဖင်သားကြီးတွေ အပေါ်အတင်းတက်ခွရင်း အပေါ်ဆီမှနေ၍ အတင်းဆောင့်သွင်းလိုးချနေသလို စုစုလဲ့ ကလည်း ထောက်ထားတဲ့ ဒူနှစ်လုံး အပေါ်မှာ အားပြုရင်း ဖင်ကြီးကို အပေါ်သို အတင်းကော့ကော့တင်ကာ ပက်ပက်စက်စက်ကို ဖင်လိုးခံပစ်နေသည် ။
ဖင်လိုးပေးနေသူနဲ့ အလိုးခံနေသူက ရမက်စိတ်ထန်ပြင်းစွာဖြင့် တက်ညီလက်ညီလိုးဆော်နေကြသည် ။ လိုးပွဲကလည်း မြိုင်ဆိုင်ပြင်းထန်လွန်းလှသည် ။ ထိုစဉ် …
“ကိုညီ … ကြမ်းလှချည်လားဗျ … ”
“အို … နေလင်း … ”
စတိုခန်းအဝမှာရပ်ပြီး ရမက်ခိုးဝေနေတဲ့ မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ နေလင်းက လှမ်းပြောပြီး အခန်းထဲသို့ လှမ်းဝင်လာသည် ။
စုစုလဲ့မှာ ဖင်လိုးခံနေရင်းတန်းလန်း နေလင်းကို မြင်တော့ ရှက်အား ၊ ကြောက်အားဖြင့် ထပြေးဖို့ပြင်းသည် ။ ဒီအခြေအနေကို ရိပ်မိသော ညီနိုင်က ကိုင်ထားလက်စ စုစုလဲ့ခါးသေးသေးလေးကို အတင်းသိုင်းဖက်ချုပ်ထားလိုက်ခြင်းကြောင့် စုစုလဲ့မှာ ဖင်ထဲ လီးတန်းလန်းကြီးနှင့် ကုန်းကုန်း ကွကွ ဖြစ်သွားရ သည် ။
“MP-4 လေးက ဖန်ပေးတဲ့ ဂွင်ပဲ နေလင်းရေ … မင်း ဆော်ချင်ရင် ငါပြီးတော့ ဆက်ဆော်ပေါ့ … ငါလည်းပြီးတော့မယ် … ”
“အိုကေ … ကျနော်လည်း အစ်မရဲ့ ဖင်အိုးကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး မှန်းမှန်းထုနေရတာ … အခုမှပဲ အပီကိုင်ရတော့မယ် … ကိုညီ မြန်မြန်လုပ်ဗျာ … ”
စုစုလဲ့ နားထင်နားရင်းတွေ ထူပူသွားမတတ် ရှက်သွားရသည် ။ ယောကျာ်းသားနှစ်ယောက် ပြောနေကြသည့် စကားတွေက ပက်စက်လွန်းလှသည် ။ စုစုလဲ့ အပေါ် ကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိ တစ်ယောက်လို့ မမြင်တော့ပဲ ပိုက်ဆံပေးရသော ကြေးစားဖာသည်မ တစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီးလိုးနေကြသလို ပြောဆိုနေကြသည်မှာ သိသာလှပေသည် ။
ဒါပေမယ့် စုစုလဲ့၏ စိတ်ထဲမှာတော့ ယောကျာ်းသားနှစ်ယောက်ပြောနေကြတဲ့ စကားတွေကို ကြားပြီး သူမကြည့်ခဲ့မိသည့် MP-4 ထဲက အပြာဇာတ်ကွက်တွေထဲမှ ယောကျာ်းနှစ်ယောက် မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဝိုင်းလိုးနေကြသည့် မြင်ကွင်းများကို ပြန်လည်မြင်ယောင်လာသည် ။ ထို့ကြောင့်လည်း ရမက်သွေးက ပိုမိုတက်ကြွလို့လာသည် ။ ညီနိုင်ကလည်း သူမခါးကို ဆွဲဖက်ပြီး ကုန်းကုန်းကွကွ အနေအထားဖြင့်ပင် ဖင်ကို ဆက်ပြီးဆောင့်လိုးနေခြင်းကြောင့် စုစုလဲ့မှ မထူးတော့ဟု စိတ်ထဲသတ်မှတ်လိုက်ရင်း အဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်ပြီး လီးအတောင်သားနှင့် သူမကိုလိုးဖို့ ရပ်စောင့်နေသည့် နေလင်းကို လှမ်းဆွဲလိုက်ကာ သူ့လီးကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေးလိုက်တော့သည် ။
“အာ .. ပါး .. ပါး .. ကောင်းလိုက်တာ … အစ်မရာ … အ .. ကျနော် … ပြီးသွားလိမ့်မယ် … အ … ကိုညီ မပြီးသေးဘူးလားဗျ …. ကျနော်လည်း … အစ်မကို … လိုးချင်လာပြီး … ”
“ဟာ … မင်းဒီလောက်တောင် လိုးချင်ရင်လည်း …. သူ့စောက်ဖုတ်အားနေတာပဲ … လာချလေကွာ … ”
“ဟင် … ကိုညီက … အနောက်ကနေ လိုးနေတာ… ကျနော်က … ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလည်း … ”
“ဟာ .. မင်းကလည်း … ဒီမှာကြည့်လေကွာ … ဒီလိုလိုးလို့ ရတာပဲ … မဟုတ်ဘူးလား .. ”
ကိုညီနိုင်က MP-4 လေးကို နေလင်းကို ဖွင့်ပြရင်း စုစုလဲ့ကိုလည်း ပြလိုက်သည် ။ MP-4 လေးထဲမှာတော့ မိန်းမ တစ်ယောက်က ဖင်ဗူးတောင်ထောင် ကုန်းပေးထားရပြီး ယောကျာ်းတစ်ယောက်က အပေါ်ဆီးမှနေပြီး ထိုမိန်းမရဲ့ ဖင်ကို လိုးနေသလို ၊ နောက်ယောကျာ်း တစ်ယောက်ကလည်း အနောက်ကနေပြီး စောက်ဖုတ်ကို လိုးပေးနေတဲ့ ဇာတ်ကွက်ပဲ ဖြစ်တော့သည် ။
“ကဲ … မလဲ့ … ကိုယ်အရှေ့ ပိုင်းကို အောက်နှိမ့်ပြီး … ဖင်ကြီးတွေ ထောင်လာအောင် ကုန်းလိုက် … ”
စုစုလဲ့ မှာလည်း ညီနိုင်ပြောသည့်အတိုင်း ကိုယ်အရှေ့ ပိုင်းကို အိပ်ယာပေါ် အသာဝပ်ပြီး ဖင်ကြီးတွေ ကော့ထောင်နေရလေအောင် ဖင်ဗူးတောင်ထောင် ပေးလိုက်ရပါတော့သည် ။ အဲ့ဒီ အခါမှာတော့ စုစုလဲ့ရဲ့ ဖင်လုံးကြီးတွေကြားမှ အပေါ်တည့်တည့်မှာရှိနေတဲ့ ဖင်ပေါက်လေးကို ညီနိုင်က သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျားစီးဖားစီး တက်ခွလိုးနေရင်း ၊ နေလင်းကလည်း သူမ တစ်ချက်နှစ်ချက်စုပ်ပေးလိုက်လို့ တံတွေးတွေရွဲနေတဲ့ သူ့လီးနဲ့ စုစုလဲ့ရဲ့ အနောက်ကို ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းပြီး လိုးပါတော့တယ် ။
လိုးချက်တွေကလည်း ပြင်းထန်လွန်းလှသည် ။ ညီနိုင်ကလည်း အပေါ်ကနေ သူမရဲ့ ဖင်ပေါက်ကို ဆောင့်ဆောင့်ချပြီး လိုးပေးနေသလို ၊ နေလင်းကလည်း အနောက်ကနေ စောက်ဖုတ်ကို ပြင်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ လိုးချက်တွေနဲ့ အားပါးတရ လိုးဆော်နေကြသည် ။ စုစုလဲ့မှာလည်း ထောက်ထားတဲ့ ဒူးကို အားပြုရင်း မနဲ အားတင်းပြီး တောင့်ခံနေရပါတော့သည် ။
သာမန်မိန်းမ တစ်ယောက်အဖို့ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစာဖို့တောင်မပြောနဲ့ အိပ်မက်တောင် မမက်ဝံတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ရဲ့ ဝိုင်းဖိပြီး ဖင်ရော စောက်ဖုတ်ကိုပါ လိုးပေးတာကို အားပါးတရ အလိုးခံလိုက်ရတဲ့ စုစုလဲ့ အဖို့မှာတော့ MP-4 လေးကြည့်မိကတည်းက တက်ကြွသောင်းကျန်းနေတဲ့ ရမက်စိတ်တွေဟာ ပီပီပြင်ပြင်ကို အားရ ကျေနပ် သွားတယ် ဆိုရပေမယ်လို့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာတရားတို့ကတော့ သုညမှတ်အောက် ရောက်လို့ သွားရပါတော့သည် ။
ဒီအခြေ ဒီအနေထိ ဖြစ်လာရတဲ့ ကိစ္စတွေက MP-4 လေး ဖွင့်ကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်နေခဲ့တဲ့ နေလင်းကိုလား ၊ နောက်ပြီး MP-4 လေးကို နေလင်း မသိအောင် ယူကြည့်မိခဲ့တဲ့ သူမကြောင့်ပဲလား ၊ ဒါမှ မဟုတ် MP-4 ကို သွားထားတုန်း အမိဖမ်း အကျပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုညီနိုင်ကိုလား အဖြေရှာ မရတဲ့ အဆုံး ၊ ဒီအဖြစ်ရဲ့ တရားခံကိုတော့ MP-4 လေးရယ် မင်းကိုပဲ အပြစ်တင်တော့ မယ်ကွယ် ….. ။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 08:18